Shuruudaha Isticmaalka - ExoSpecial
Shabakadda ExoSpecial.com waa shaqo daabacan oo ay iska leedahay ExoSpecial. Tilmaamaha Bogga qaarkood ayaa laga yaabaa inay hoos yimaadaan tilmaamo dheeraad ah, shuruudo, ama xeerar, kuwaas oo lagu dhejin doono goobta ee la xidhiidha sifooyinkaas.
Shuruudaha Isticmaalka ayaa qeexay shuruudaha iyo shuruudaha sharciga ah ee ilaalinaya isticmaalkaaga bogga. Markaad gelayso goobta, waxaad u hoggaansamaysaa shuruudahan oo waxaad u taagan tahay inaad leedahay awoodda iyo awoodda aad ku geli karto Shuruudahan. Waa inaad jirtaa ugu yaraan 18 sano si aad u gasho goobta. Haddi aad ku khilaafto mid ka mid ah shuruudahan, ha isticmaalin goobta.
Iyadoo la raacayo Shuruudahan. ExoSpecial waxay ku siinaysaa mid aan la wareejin karin, aan gaar ahayn, lagala noqon karo, shatiga xaddidan si aad u gasho bogga oo keliya isticmaalkaga gaarka ah, ee aan ganacsiga ahayn wuxuuna si adag u mamnuucayaa nooc kasta oo xogta ah.
Xaddidaadaha qaarkood. Xuquuqda lagu ansixiyey Shuruudahan waxay ku xiran yihiin xannibaadaha soo socda: (a) Waa inaadan iibin, kirayn, kirayn, wareejin, meelayn, qaybin, martigelin, ama haddii kale ganacsi ahaan uga faa'iidaysan Bogga; (b) Waa inaadan bedelin, samayn shuqullo asal ah, kala diri, dib-u-dhigis ama dib-u-dejin qayb ka mid ah bogga; (c) waa inaadan galin goobta si aad u dhisto shabakad la mid ah ama tartan leh; iyo (d) marka laga reebo sida si cad halkan loogu sheegay, ma jiro qayb ka mid ah bogga lama koobiyn karo, dib loo daabacin, lama qaybin karo, dib loo daabici karo, lama soo dejin karo, lama soo bandhigi karo, la dhejin karo ama lagu gudbin karo qaab kasta ama si kastaba ha ahaatee haddii aan si kale loo sheegin, sii deyn mustaqbalka, cusbooneysiin, ama wax kale oo dheeri ah oo ku saabsan shaqada goobta waa in lagu dabaqaa shuruudahan. Dhammaan xuquuqda daabacaadda iyo ogeysiisyada kale ee lahaanshaha ee bogga waa in lagu hayaa dhammaan koobiyada.
Shirkaddu waxay xaq u leedahay inay beddesho, hakiso, ama joojiso bogga ogeysiis la'aan adiga. Waxaad ogolaatay in Shirkadda aan lagugu qaban doonin adiga ama cid saddexaad oo isbeddel ah, joojin, ama joojinta Bogga ama qayb kasta.
Ma jirto Taageero ama Dayactir. Waxaad ogolaatay in Shirkaddu aysan wax waajibaad ah ku yeelan doonin inay ku siiso taageero kasta oo la xiriirta goobta.
Marka laga reebo Nuxurka Isticmaale kasta oo aad bixin karto, waxaad la socotaa in dhammaan xuquuqaha lahaanshaha aqooneed, oo ay ku jiraan xuquuqda daabacaadda, shatiyada, calaamadaha ganacsiga, iyo siraha ganacsiga, ee ku jira bogga iyo waxa ku jira ay leeyihiin alaab-qeybiyeyaasha Shirkadda ama Shirkadda. Ogsoonow in Shuruudahan iyo gelitaanka Boggu aysan ku siin wax xuquuq ah, cinwaan ama daneyn ama xuquuq kasta oo hanti garaad, marka laga reebo xuquuqda xaddidan ee gelitaanka lagu sheegay heshiiskan. Shirkadda iyo alaab-qeybiyeyaasheeda waxay xafidaan dhammaan xuquuqaha aan lagu bixin Shuruudahan.
Xidhiidhada Kooxda Saddexaad & Xayeysiisyada; Isticmaalayaasha kale
Xidhiidhada Kooxda Saddexaad & Xayeysiisyada. Boggu waxa uu ka koobnaan karaa isku xirka shabakadaha iyo adeegyada dhinac saddexaad, iyo/ama soo bandhigo xayaysiisyada qolo saddexaad. Xidhiidhiyayaasha iyo xayaysiisyada xisbiga saddexaad ma hoos yimaadaan shirkadda, shirkadduna mas'uul kama aha xidhiidhinta iyo xayaysiisyada dhinac saddexaad. Shirkaddu waxay siisaa gelitaanka Xidhiidhiyayaasha iyo Xayeysiiskan dhinac saddexaad oo keliya si ay kugu habboonaato, oo dib u eegi mayso, ansixiso, ma kormeerto, ma taageerto, ma dammaanad qaadayso, ama ma samaynayso wax matalaad ah oo ku saabsan Xidhiidhiyayaasha iyo Xayeysiiska dhinac saddexaad. Isticmaal dhammaan isku xidhka iyo xayaysiisyada dhinac saddexaad ee khatartaada ah, oo waa in aad ku dabaqdo taxadar iyo taxaddar ku habboon oo ku habboon sidaas. Markaad gujiso mid ka mid ah Xidhiidhada & Xayeysiiska Dhinac saddexaad, shuruudaha iyo siyaasada kooxda saddexaad ee lagu dabaqi karo ayaa lagu dabaqayaa, oo ay ku jiraan sirta kooxda saddexaad iyo dhaqamada ururinta xogta.
Isticmaalayaasha Kale. Isticmaale kasta oo site ayaa kaligiis masuul ka ah wax kasta iyo dhammaan waxa ku jira isticmaaleheeda. Sababtoo ah ma maamulno Content User, waxaad qiratay oo ogolaatay in aanan mas'uul ka ahayn wax kasta oo ka mid ah macluumaadka isticmaalaha, haddii ay bixiso adiga ama kuwa kale. Waxaad ogolaatay in Shirkaddu aysan mas'uul ka noqon doonin wixii khasaare ama dhaawac ah ee ka dhasha isdhexgalkaas oo kale.
Waxaad halkan ku sii daynaysaa oo aad weligaa shaqada ka saartaa Shirkadda iyo saraakiishayada, shaqaalaheenna, wakiilladayada, kuwa beddelaya, oo aad meel ka saartay, oo aad halkan ka dhaaftay oo aad ka tanaasushay, mid kasta oo hore, hadda iyo mustaqbalka muran, sheegasho, muran, dalab, xuquuq, waajibaad, masuuliyad. ficilka iyo sababta ficilka nooc kasta iyo dabeecad kasta, ka soo kacay ama si toos ah ama si dadban uga soo baxay, ama si toos ah ama si dadban ula xidhiidha, Bogga. Haddii aad degan tahay California, waxaad halkan ka dhaaftay xeerka madaniga ah ee California qaybta 1542 ee la xidhiidha arrimaha kor lagu soo sheegay, kaas oo odhanaya: "Siidaynta guud kuma kordhinayso sheegashooyinka uu dayn-bixiyuhu garanayn ama uu tuhunsan yahay inay ku jiraan isaga ama iyada raalli ahaanshaha wakhtiga la fulinayo sii daynta, taas oo haddii uu ogaado isaga ama iyada ay tahay inay si dhab ah u saamaysay heshiiska uu la leeyahay dayn-hayaha."
Kukiyada iyo Beekoonka Shabkada. Sida shabakad kasta oo kale, ExoSpecial waxay isticmaashaa 'cookies'. Kukiyadan waxa loo isticmaalaa in lagu kaydiyo macluumaadka ay ku jiraan dookhyada booqdayaasha, iyo bogagga mareegaha uu booqdehu galay ama booqday. Macluumaadka waxaa loo istcimaalaa in lagu wanaajiyo khibradaha isticmaalayaasha iyadoo la habeynayo waxa ku jira bogga shabakada iyadoo lagu salaynayo nooca browserka booqdayaasha iyo/ama macluumaadka kale.
Goobta waxaa lagu bixiyaa "sida-sida" iyo "sida la heli karo", iyo shirkadda iyo alaab-qeybiyeyaashayadu waxay si cad u diidaan dhammaan dammaanadaha iyo shuruudaha nooc kasta, ha ahaado mid cad, si maldahan, ama sharci ah, oo ay ku jiraan dhammaan dammaanadaha ama shuruudaha ganacsiga. , u fayow ujeedo gaar ah, magac, raaxaysi aamusan, saxsanaan, ama xadgudub la'aan. Annaga iyo alaab-qeybiyeyaashayadu ma dammaanad qaadayno in goobta ay buuxin doonto shuruudahaaga, lagu heli doono si aan kala go' lahayn, waqti ku habboon, ammaan ah, ama ku salaysan khaladaad, ama waxay noqon doontaa mid sax ah, la isku halayn karo, xor ka ah fayras ama kood kale oo waxyeello leh, dhammaystiran, sharci ah. , ama ammaan. Haddii sharciga lagu dabaqi karo uu u baahan yahay wax dammaanad ah oo ku saabsan goobta, dhammaan dammaanadaha noocaan ah waxay ku xaddidan yihiin muddada sagaashan (90) maalmood laga bilaabo taariikhda isticmaalka koowaad.
Maxkamadaha qaarkood ma ogola ka saarida dammaanad qaadka, markaa ka saarida sare adiga kuma khusayso. Xukunada qaar ma ogola xadaynta inta dammaanad la maldahan soconayo, markaa xaddidaadda sare adiga kuma khusayso.
Ilaa xadka ugu badan ee sharcigu ogolyahay, ma jirto dhacdo shirkad ama alaab-qeybiyeyaasheenu kugu mas'uul noqon doonaan adiga ama dhinac saddexaad wixii faa'iido ah ee luntay, xogta lunta, kharashyada soo iibinta alaabada beddelka ah, ama mid kasta oo aan toos ahayn, cawaaqib leh, ku dayasho leh, shil ah, waxyeelo gaar ah ama ciqaab ah oo ka dhalata ama la xidhiidha shuruudahan ama isticmaalkaaga, ama awood la'aanta isticmaalka goobta xitaa haddii shirkadda lagula taliyay suurtagalnimada waxyeeladaas. Gelitaanka iyo isticmaalka goobta waa ikhtiyaarkaaga iyo khatartaada, waxaadna kaligaa masuul ka noqon doontaa waxyeello kasta oo soo gaadha qalabkaaga ama nidaamka kombayutarka, ama luminta xogta ka dhalata.
Ilaa xadka ugu badan ee sharcigu ogol yahay, in kasta oo ay jiraan wax liddi ku ah oo halkan ku jira, masuuliyada aan kaa saaranahay wixii waxyeelo ah ee ka dhasha ama la xidhiidha heshiiskan, waxa ay had iyo jeer ku koobnaan doontaa ugu badnaan konton doolarka Maraykanka ah (US $50). Jiritaanka wax ka badan hal sheegasho ma kordhin doonto xadkan. Waxaad ogolaatay in alaab-qeybiyeyaashayadu aysan yeelan doonin wax mas'uuliyad ah nooc kasta oo ka dhasha ama la xiriira heshiiskan.
Maxkamadaha qaarkood ma ogola xaddidaadda ama ka saarida mas'uuliyadda waxyeelada lama filaanka ah ama ka dhalan karta, markaa xaddidaada sare ama ka saarida lagama yaabo inay ku khusayso adiga.
Muddada iyo Joojinta. Iyadoo la raacayo Qaybtan, Shuruudahani waxay ahaan doonaan kuwo si buuxda u dhaqan gala inta aad isticmaalayso Bogga Waxaa laga yaabaa inaan joojino ama joojino xuquuqdaada isticmaalka bogga wakhti kasta sabab kasta oo ay tahay go'aankayaga, oo ay ku jirto isticmaalka kasta oo bogga ah ee xadgudubka Shuruudahan. Marka la joojiyo xuquuqdaada hoos yimaada Shuruudahan, Koontadaada iyo xaqa aad u leedahay inaad gasho oo aad isticmaasho Bogga ayaa isla markiiba joojin doona. Waxaad fahantay in joojinta Koontadaada ay ku lug yeelan karto tirtirka Macluumaadka Isticmaalahaaga ee la xidhiidha Koontadaada lagana saaro xogtayada nool. Shirkadda ma yeelan doonto wax masuuliyad ah si kasta oo ay tahay joojinta xuquuqahaaga hoos yimaada Shuruudahan.
Shirkaddu waxay ixtiraamtaa hantida garaadka dadka kale waxayna waydiisaa isticmaalayaasha Bogeena inay sidaas oo kale sameeyaan. Marka la eego Boggeena, waxaanu qaadanay oo aanu dhaqangelinay siyaasad ixtiraamaysa sharciga xuquuqda daabacaadda oo bixisa ka saarista agab kasta oo ku xad-gudbida iyo joojinta isticmaalayaasha Boggeena online-ka ah ee soo noqnoqda ku xad-gudbida xuquuqda hantida garaadka, oo ay ku jiraan xuquuqda daabacaada. Haddii aad aaminsantahay in mid ka mid ah isticmaaleyaasheenna uu, iyadoo la adeegsanayo boggayaga, uu si sharci darro ah ugu xad-gudbaynayo xuquuqda daabacaada ee shaqada, oo aad rabto in laga saaro walxaha xadgudubka lagu soo eedeeyay, macluumaadka soo socda oo qaab qoraal ah (sida waafaqsan. ilaa 17 USC § 512(c)) waa in la bixiyaa:
saxiixaaga jirka ama elektarooniga ah;
aqoonsiga shaqada(yada) xuquuqda daabacaada ee aad sheegtay in lagu xad-gudbay;
aqoonsiga walxaha ku jira adeegyadayada ee aad sheeganayso inay xad-gudbinayaan iyo inaad naga codsato inaan meesha ka saarno;
macluumaad ku filan oo noo ogolaanaya inaan helno waxyaabahaas;
ciwaankaga, talefoon lambarkaaga, iyo ciwaanka iimaylka;
bayaan ah in aad aaminsan tahay in isticmaalka walxaha diidmada ah aan la oggolayn; iyo
bayaan ah in xogta ku jirta wargelintu ay tahay mid sax ah, oo ay hoos imanayso ciqaabta been-abuurka, in aad tahay milkiilaha xuquuqda daabacaada ee lagu eedeeyay in lagu xad-gudbay ama laguu oggolaaday in aad u matasho milkiilaha xuquuqda daabacaada.
Fadlan la soco in, iyadoo la raacayo 17 USC § 512(f), wax kasta oo been abuur ah oo xaqiiqada walxaha ku jira ogaysiis qoran waxay si toos ah ugu gudbinaysaa dhinaca cabashada wixii waxyeelo ah, kharashyada iyo kharashka qareenka ee aanu galnay ee la xidhiidha ogeysiinta qoran iyo eedaymaha ku xadgudubka xuquuqda daabacaada.
Shuruudahani waxay ku xiran yihiin dib u eegis marmar ah, iyo haddii aan samayno wax isbedel ah oo la taaban karo, waxa laga yaabaa inaan ku ogeysiinno annagoo ii-mayl kuugu soo dirno iimaylkii ugu dambeeyay ee aad na siisay iyo/ama si cad oo ogeysiis ah isbeddellada ugu soo dhejineyno our Goobta Adiga ayaa ka mas'uul ah inaad na siiso ciwaanka iimaylka ugu dambeeyay. Haddii ay dhacdo in ciwaanka iimaylka ugu dambeeya ee aad na siisay aanu ansax ahayn diritaankayada e-mailka uu ku jiro ogaysiiskan ayaa si kastaba ha ahaatee noqon doona ogaysiis wax ku ool ah oo isbedelada lagu sheegay ogaysiiska. Isbeddel kasta oo Shuruudahan lagu sameeyo waxa ay dhaqan gelayaan ugu horraysa soddonka (30) maalmood ee taariikhda ka dib markii aan kuu soo dirno ogeysiis iimaylka adiga ama soddon (30) maalmood oo taariikhi ah ka dib dhejinta ogeysiiska isbeddellada ee Boggayaga. Isbeddelladani waxay isla markiiba waxtar u yeelan doonaan isticmaalayaasha cusub ee Boggeena. Isticmaalka joogtada ah ee Bogeena ka dib ogaysiiska isbedelada noocan oo kale ah ayaa muujin doona qirashadaada isbedelada noocaan ah iyo heshiiska lagu xirayo shuruudaha iyo shuruudaha isbedeladaas.
Fadlan si taxadar leh u akhri heshiiskan dhexdhexaadinta. Waa qayb ka mid ah heshiiska aad la gashay Shirkadda waxayna saamaynaysaa xuquuqdaada. Waxa ay ka kooban tahay habraac loogu talagalay gar-qaadashada qasabka ah ee ku-xidhnaanshaha iyo ka-dhaafitaanka tallaabo heerka fasalka ah.
Ku-habboonaanta Heshiiska Dhex-dhexaadinta. Dhammaan sheegashooyinka iyo khilaafyada la xidhiidha Shuruudaha ama isticmaalka badeecad kasta ama adeeg kasta oo ay bixiso Shirkadda oo aan lagu xallin karin si aan rasmi ahayn ama maxkamadda sheegashooyinka yaryar waa in lagu xalliyaa dhexdhexaadinta ku-meel-gaadhka ah ee shakhsi ahaaneed iyada oo la raacayo shuruudaha Heshiiska Dhex-dhexaadinta. Haddii aan si kale lagu heshiin, dhammaan dacwooyinka dhexdhexaadinta waa in lagu qabtaa Ingiriis. Heshiska Dhexdhexaadintani waxa uu quseeyaa adiga iyo Shirkada, iyo shirkado kasta, xidhiidhiyayaal, wakiilo, shaqaale, kuwii ka horeeyay ee danaynaya, kuwa ku guulaystay, iyo meelaynta, iyo sidoo kale dhammaan isticmaalayaasha la oggol yahay ama aan la ogalayn ama ka faa'iidaystayaasha adeegyada ama alaabta lagu bixiyo Shuruudaha.
Shuruudaha Ogeysiinta iyo Xallinta Khilaafaadka Rasmiga ah. Inta aanay labada dhinac midkoodna gar qaadin, xisbigu waa inuu marka hore dhinaca kale u diraa Ogeysiiska Muranka oo qoraal ah oo qeexaya nooca iyo waxa uu salka ku hayo dacwada ama khilaafka, iyo gargaarka la codsaday. Ogeysiinta Shirkadda waa in loo soo diraa sharci@exospecial.com. Ka dib marka Ogeysiiska la helo, adiga iyo Shirkadda waxaad isku dayi kartaan inaad ku xalliso dacwada ama khilaafka si aan rasmi ahayn. Haddii adiga iyo Shirkadda aydaan ku xalin cabashada ama khilaafka soddon (30) maalmood gudahooda ka dib marka Ogeysiiska la helo, labada dhinac midkood wuxuu bilaabi karaa dacwad dhexdhexaadin ah. Inta uu le'eg yahay heshiis kasta oo ay bixiso dhinac kasta lama shaacin karo dhexdhexaadiyaha ilaa uu garqaaduhu go'aamiyo qaddarka abaal-marinta ay labada dhinac xaq u leeyihiin.
Xeerarka Dhexdhexaadinta. Dhexdhexaadinta waa in laga bilaabo iyada oo loo marayo Ururka Xalinta Khilaafaadka Maraykanka, bixiye xalinta khilaafaadka beddelka ah oo bixiya dhexdhexaadinta sida lagu sheegay qaybtan. Haddii AAA aysan diyaar u ahayn inay u garqaado, dhinacyadu waa inay ku heshiiyaan inay doortaan Bixiye ADR ah. Xeerarka ADR Bixiyaha ayaa maamuli doona dhammaan dhinacyada dhexdhexaadinta marka laga reebo ilaa xadka xeerarkan ay ka hor imaanayaan Shuruudaha. Xeerarka dhexdhexaadinta Macmiilka AAA ee xukuma garqaadista waxa laga heli karaa onlayn ADR.org ama adoo wacaya AAA 1-800-778-7879. Garqaadka waa in uu qabtaa hal garqaad dhexdhexaad ah. Sheegasho kasta ama khilaaf kasta oo wadarta cadadka abaalgudka la raadiyo ay ka yar tahay Toban Kun oo Doolarka Maraykanka ah (US $10,000.00) waxa lagu xalin karaa iyada oo la adeegsanayo dhexdhexaadin aan muuqaal ku salaysnayn, iyada oo la raacayo ikhtiyaarka dhinaca gargaarka doonaya. Dacwadaha ama khilaafyada halka wadarta cadadka abaalgudka la raadiyay ay tahay Toban Kun oo Doolarka Mareykanka ah (US $10,000.00) ama ka badan, xaqa dhegeysiga waxaa go'aamin doona Xeerarka Xalinta Khilaafaadka. Dhagaysi kasta waxa lagu qaban doonaa meel 100 mayl u jirta meesha aad degan tahay, ilaa aad degan tahay meel ka baxsan Maraykanka, iyo ilaa ay dhinacyadu si kale ku heshiiyaan mooyaane. Haddii aad degan tahay meel ka baxsan Maraykanka, garqaaduhu waa inuu dhinacyada ogeysiin macquul ah ku siiyaa taariikhda, wakhtiga iyo goobta dhegaysi afka ah. Xukun kasta oo ku saabsan abaal-marinta uu bixiyo garqaaduhu waxa laga yaabaa in la galiyo maxkamad kasta oo awood u leh. Haddii garqaaduhu ku siiyo abaal-marin ka weyn bixinta dejinta ugu dambaysay ee ay Shirkaddu ku samaysay ka hor bilaabashada dhexdhexaadinta, Shirkaddu waxay ku siin doontaa inta ugu badan abaalmarinta ama $2,500.00. Dhinac kastaa waa inuu qaataa kharashkiisa iyo kharashkiisa ka soo baxa dhexdhexaadinta oo waa inuu bixiyaa qayb la mid ah kharashka iyo kharashyada bixiyaha ADR.
Xeerarka Dheeraadka ah ee Xalinta Khilaafaadka Ku Salaysan Aan Muuqan Haddii dhexdhexaadin aan muuqan la doorto, dhexdhexaadinta waa in lagu qabtaa telefoon, online iyo/ama ku salaysan kaliya soo gudbin qoraal ah; qaabka gaarka ah waxaa dooranaya kooxda bilaabaysa gar-qaadka. Garqaadku kuma lug lahaan karo muuqaal shakhsi ah oo dhinacyada ama markhaatiyada haddii aan si kale loogu heshiin.
Waqtiga xaddidan Haddii adiga ama Shirkadda aad raacdo garqaadidda, tallaabada dhexdhexaadinta waa in la bilaabaa iyo/ama la dalbadaa inta lagu jiro sharciga xaddidaadda iyo gudahooda kama dambaysta ah ee lagu soo rogay Xeerarka AAA ee sheegashada khuseeya.
Awoodda garqaadaha. Haddii dhexdhexaadinta la bilaabo, dhexdhexaadiyaha ayaa go'aamin doona xuquuqda iyo deymaha adiga iyo Shirkadda, khilaafkana laguma xoojin doono arrimo kale ama lagu biirin doono kiisas kale ama dhinacyo kale. Garqaaduhu waa inuu awood u leeyahay inuu bixiyo mooshin lid ku ah dhammaan ama qayb ka mid ah dacwad kasta. Garqaaduhu waa inuu awood u leeyahay inuu bixiyo magdhaw lacageed, iyo inuu bixiyo wax kasta oo aan lacag ahayn daawayn ama gargaar uu heli karo shakhsiga hoos yimaada sharciga lagu dabaqi karo, Xeerarka AAA, iyo Shuruudaha. Garqaaduhu waa inuu soo saaraa abaalmarin qoraal ah iyo bayaan go'aan ah oo qeexaya natiijooyinka muhiimka ah iyo gabagabada ay ku salaysan tahay abaalgudka. Garqaaduhu waxa uu leeyahay awood la mid ah in uu ku abaalmariyo gargaarka shakhsi ahaaneed ee uu garsooraha maxkamadda sharciga yeelan doono. Abaalmarinta garqaadaha waa kama dambays oo ku xidhan adiga iyo Shirkadda.
Ka dhaafida Maxkamadeynta Xeerbeegtida. XUSBIYADU HALKAAN AYAY KA TIRSANAYAAN XUQUUQDOODA DASTUURIGA AH IYO XUQUUQDA SHARCI AH EE AY U TAGAN KARAAN MAXKAMADDA OO AY MAXKAMADDA KA HORJEEDAAN GARSOORKA AMA GARSOORKA, taa beddelkeedana ay doortaan in dhammaan sheegashooyinka iyo khilaafyada lagu xalliyo gar-qaadis sida uu dhigayo heshiiskan Xalinta Khilaafaadka. Nidaamyada dhexdhexaadintu caadi ahaan waa ka xadidan yihiin, ka tayo badan yihiin oo waa ka kharash yar yihiin xeerarka lagu dabaqi karo maxkamadda waxayna ku xiran yihiin dib u eegis aad u xaddidan maxkamad. Haddii ay dhacdo in dacwad kasta ay ka dhex dhalato adiga iyo Shirkadda mid kasta oo ka mid ah gobolka ama maxkamad federaali ah oo lagu dacwaynayo in la banneeyo ama la dhaqan geliyo abaal-marin dhexdhexaadin ah ama haddii kale, Adiga iyo shirkadu waxay ka tanaasulaan dhammaan xuquqaha MAXKAMADDA GARSOORKA, taa beddelkeeda aad dooranayso in khilaafka la xalliyo. garsoore.
Ka-dhaafitaanka Fasalka ama Tallaabooyinka Isku-dhafka ah. Dhammaan sheegashooyinka iyo khilaafyada ku jira baaxadda heshiiskan dhexdhexaadinta waa in loo garqaadaa ama lagu dacweeyaa si gaar ah oo aan lagu saleyn fasal, iyo sheegashooyinka hal macaamiil ama isticmaale lama garqaadi karo ama laguma dacwayn karo si wadajir ah ama laguma xoojin karo kuwa macaamilka kale. ama isticmaale.
Qarsoodiga. Dhammaan dhinacyada dacwadda dhexdhexaadinta waa inay ahaadaan kuwo qarsoodi ah. Dhinacyadu waxay ku heshiiyaan in ay ilaaliyaan sirta ilaa si kale sharcigu u farayo. Cutubkani kama hor istaagi doono dhinac inuu u gudbiyo maxkamada sharciga wixii macluumaad ah ee lagama maarmaanka u ah dhaqan gelinta heshiiskan, si loo dhaqan geliyo gar-qaadka gar-qaadista, ama si loo raadiyo gar-gaar ama gargaar siman.
Kordhinta. Haddii qayb ama qayb ka mid ah Heshiiska Dhex-dhexaadinta lagu helo sharciga inay yihiin kuwo aan ansax ahayn ama aanay fulin karin maxkamad awood u leh, markaa qayb ama qaybo gaar ah ma noqon doonaan wax xoog ah ama saameyn ah waana la gooyaa inta ka hartay heshiiska waa in la gooyaa. ku sii wad si buuxda oo saamayn leh.
Xaqa in laga tanaasulo Mid kasta ama dhammaan xuquuqaha iyo xaddidaadaha lagu sheegay Heshiiska Dhex-dhexaadinta waxaa laga yaabaa in laga dhaafo dhinaca laga soo xigtay sheegashada. Ka dhaafida noocaan ah waa in aysan ka tanaasulin ama saameynin qayb kale oo ka mid ah Heshiiska Dhex-dhexaadinta.
Badbaadinta Heshiiska. Heshiiska Dhexdhexaadinta wuxuu ka badbaadi doonaa joojinta xiriirkaaga Shirkadda.
Maxkamadda Sheegashooyinka Yaryar. Si kastaba ha ahaatee kuwan soo socda, midkiin adiga ama Shirkadda waxaa laga yaabaa inaad soo bandhigtaan fal shakhsiyeed maxkamad sheegashooyinka yaryar.
Gargaarka Degdegga ah ee loo siman yahay. Si kastaba ha ahaatee arrimaha kor ku xusan, labada dhinacba waxay ka raadsan karaan gargaar deg deg ah oo loo siman yahay ka hor maxkamad gobol ama federaal si loo ilaaliyo heerka dhexdhexaadinta ee taagan. Codsiga talaabooyinka ku meel gaadhka ah looma qaadan doono ka tanaasulida xuquuqaha ama waajibaadka kale ee hoos yimaada Heshiiska Dhexdhexaadinta.
Dacwooyinku Aanay Hoostagin Xalinta Khilaafaadka. Iyadoo aan loo eegin kuwa hore, sheegashada sumcad-dilista, ku-xadgudubka Xeerka Ku-xadgudubka Kumbuyuutarka iyo Ku-xadgudubka, iyo ku-xadgudubka ama ku-takri-falka dhinaca kale ee patent-ka, xuquuqda daabacaada, summadda ganacsiga ama sirta ganacsiga ma hoos imaan doono heshiiskan Xalinta Khilaafaadka. Xaalad kasta oo Heshiiska Dhexdhexaadinta ee hore uu u ogolanayo dhinacyadu inay ka dacwoodaan maxkamadda, dhinacyadu waxay halkan ku heshiiyaan inay u soo gudbiyaan awoodda shakhsi ahaaneed ee maxkamadaha ku yaal gudaha gobolka Louisiana, ujeedooyinkaas.
Boggu waxa laga yaabaa in uu hoos yimaado shuruucda xakamaynta dhoofinta ee Maraykanka waxana laga yaabaa in ay hoos yimaadaan shuruucda dhoofinta ama soo dejinta ee wadamada kale. Waxaad ogolaatay inaadan dhoofin, dib u dhoofin, ama wareejin, si toos ah ama si dadban, xog kasta oo Maraykan ah oo laga helay Shirkadda, ama alaab kasta oo isticmaalaysa xogtan, xadgudub ku ah sharciyada dhoofinta Maraykanka.
Haddii aad degan tahay California, waxaad u sheegi kartaa cabashooyinka Qaybta Kaalmada Cabashada ee Qaybta Waxsoosaarka Macmiilka ee Waaxda Arrimaha Macmiilka ee California adiga oo qoraal kula xidhiidho 400 R Street, Sacramento, CA 95814.
Isgaarsiinta Elektarooniga ah. Xidhiidhka u dhexeeya adiga iyo Shirkadda waxay isticmaalaan hab elegroonig ah, haddii aad isticmaasho bogga ama aad noo soo dirto iimaylo, ama haddii ay Shirkaddu ogeysiisyo ku soo dhejiso bogga ama ay kugugula xidhiidho iimaylka. Ujeeddooyin heshiis ah, waxaad (a) ogolaatay inaad ka hesho isgaarsiinta Shirkadda qaab elektaroonik ah; iyo (b) ku heshiiyaan in dhammaan shuruudaha, heshiisyada, ogeysiisyada, bandhigyada, iyo isgaarsiinta kale ee ay Shirkaddu ku siiso si elektaroonig ah ay ku qanciso waajibaad kasta oo sharci ah oo isgaarsiintan ay ku qancin lahayd haddii ay ahaan lahayd qoraal nuqul ah.
Shuruudaha oo dhan Shuruudahani waxay ka kooban yihiin dhammaan heshiiskii adiga iyo annaga naga dhexeeya ee ku saabsan isticmaalka bogga. Ku guuldareysigayaga inaan fulino ama fulino xuquuq kasta ama bixinta Shuruudahan uma shaqayn doono ka tanaasulida xaqaas ama bixinta. Ciwaanada qaybta ee Shuruudahan waxa loogu talagalay in lagu raaxaysto oo kaliya oo aan lahayn saamayn sharci ama qandaraas ah. Erayga "ay ku jirto" macnihiisu waa "ka mid ahaanshaha aan xadidnayn". Haddii wax kasta oo Shuruudahan ka mid ah loo haysto inuu yahay mid aan sax ahayn ama aan la fulin karin, qodobbada kale ee Shuruudahan waxay noqon doonaan kuwo aan waxba ka tari doonin oo qodobka aan ansax ahayn ama aan la dhaqangelin karin ayaa loo arki doonaa in wax laga beddelay si ay u noqoto mid ansax ah oo lagu dhaqan gelin karo ilaa xadka ugu badan ee sharcigu oggol yahay. Xidhiidhka aad la leedahay Shirkadda waa kan qandaraasle madax-banaan, dhinacna maaha wakiil ama lammaane kan kale. Shuruudahan, iyo xuquuqahaaga iyo waajibaadkaaga halkan ku jira, laguma meelayn karo, qandaraas-hoosaad, wakiil, ama haddii kale laguu wareejin adiga iyada oo aan ogolaansho qoraal ah oo hore oo shirkad ah haysan, iyo iskuday kasta oo shaqo, qandaraas-hoosaad ah, ergada, ama wareejinta ku xad-gudbida waxa kor ku xusan waxay noqon doontaa mid bura maran. Shirkadda waxay si xor ah u meelayn kartaa Shuruudahan. Shuruudaha iyo shuruudaha lagu sheegay Shuruudahan waa inay ku xidhnaadaan dadka loo xilsaaray.
Macluumaadka Calaamadaha Ganacsiga. Dhammaan calaamadaha ganacsiga, calaamadaha iyo calaamadaha adeegga ee lagu soo bandhigay bogga waa hantideena ama hantida qaybaha kale ee saddexaad. Laguuma ogola inaad isticmaasho calaamadahan adiga oo aan ogolaansho hore oo qoraal ah haysan ama ogolaanshaha qolo sadexaad oo yeelan karta calamadaha.
Wixii su'aalo ah ee ku saabsan siyaasaddan, fadlan la xiriir sharci@exospecial.com goor kasta.
Xuquuqda daabacaadda © 2022 ExoSpecial. All Rights Reserved.